अहिले यस्ती भइन नायिका श्वेता खड्का हेर्नुहोस् तस्बिरहरू – Hamrosandesh.com
अहिले यस्ती भइन नायिका श्वेता खड्का हेर्नुहोस् तस्बिरहरू
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित अभिनेता स्व: श्रीकृष्ण श्रेष्ठ कि श्रीमती हुन् श्वेता खड्का ! अभिनेत्री श्वेता खड्का सँग विवाह बन्धनमा बाधिएको केही महिनामै अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएको थियो ।लामो समय सम्म प्रेममा रहेका श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र नायिका श्वेता खड्काले विवाह गरेका थिए । नायिका श्वेता खड्कालाई जीवनमा यति पिडा पर्‍यो कि जुन सोच्न पनि सकिँदैनन् ! विवाह भएको केही महिना मै आफ्नो पति गुमाउँदाको पिडा त सायद श्वेता लाई मात्र थाहा होला त्यो बेलाको पिडा केहो भन्ने, कुरा त्यति मात्र हैन उनको जीवनमा धेरै आपत हरू आइपरे पति गुमाएपछीको घाउ सेलाउन नपाउँदै अभिनेत्री श्वेताको चिउँडो को मुनि पट्टी आएको ट्युमरले गर्दा उनले चलचित्र नै छोड्नु पर्‍यो ।
फेसबुकमा भावुक स्टाटस लेख्दै खड्काले जीवनमा केही कुराको पनि निश्चितता नहुने बताएकि थिइन् । उनले भने जस्तै जिवनमा थुप्रै अनिश्चित पीडादायि घट्नाबाट गुज्रिनुपर्यो । उनले छोटो उमेरमै जिवनको फरक रंगसँग जुध्नुपरिरहेको छ । खुशी हुन सिकिरहेकि स्वेतालाई आफ्नो स्वास्थ्यले फरक बनाइदिएको छ । खुशीका साथ जिवन बिताइरहेकि स्वेताको जिवनशैलिनै फरक भएको छ । तर, नायिका स्वेताले पीडाकोबिच माझी बस्तीको निर्माण गर्नु लगायत विभिन्न व्यवसायमा हात हाल्नुले नै देखाउँछ कि उनी साहसी नारी हुन् । स्वेतालाई आगामी सफलता र शिघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना !श्वेताको माझी बस्ती: विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिले सामाजिक कार्य गर्नेभन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामार्फत प्रचार गरिरहेको बेला अभिनेत्री श्वेताले कसैले थाहै नपाउने गरी थुप्रै घरहरू बनाएर गरिव जनताको मन जितेकी छिन् ।
सामाजिक काम गर्न लागेको भन्दै केही व्यक्ति र फाउण्डेशनले सामाजिक सञ्जाल पत्रपत्रिकामा प्रचार प्रसार गरेर लोकप्रियतामा रमाउन चाहेको आरोप लागेको पाइन्छ । तर , अभिनेत्री खड्काले गुपचुप रुपमा एउटा बस्ती नै निर्माण गरेर हस्तान्तरणको अन्तिम तयारीमा छिन् ।हेर्दा चिटिक्क देखिने बस्तिका घरहरु देख्दा मन नै लोभ्याउने खालको छ। स्वेता श्री फाउन्डेसनको अभिभावकत्व तथा संरक्षणमा सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्ती निर्माण भएको हो।खड्का सबैको प्रेरणाकी स्रोत बनेकी छिन् । श्वेताश्री फाउण्डेशनमार्फत अभिनेत्री खड्काले भूकम्पपछि तहसनहस बनेको सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीका ५३ घर बनाएकी हुन् । अभिनेत्री खड्काले गुपचुप रुपमा एउटा बस्ती नै निर्माण गरेकि छिन् ।
खड्का सबैको प्रेरणाकी स्रोत बनेकी छिन् । श्वेताश्री फाउण्डेशनमार्फत अभिनेत्री खड्काले भूकम्पपछि तहसनहस बनेको सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीका ५३ घर बनाएकी हुन् ।माझीबस्ती निर्माण गर्नका लागि अभिनेत्री खड्काले सार्वजनिक रुपमा चन्दा नामागी र कसैले आफ्नै स्वइच्छाले दिएको सहयोगलाई इन्कारी पनि गरिनन् । माझीबस्ती बनाउने क्रममा पैसा अभाव भएपछि अभिनेत्री खड्काले आफ्नै घर सहकारी संस्थामा धितो राखेकी छन ।खड्काले चौतारा साँगा चोकगढी नगरपालिका–१४ भीमटार माझी बस्तीका लागि आवास निर्माण गरेकी हुन् । ४ सय ६५ वर्ग फिटमा निर्माण भएका घरको लागत प्रतिघर करीव ७ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । उनले विभिन्न किसिमका आर्थिक संकटहरु झेल्दै माझी बस्ती बनाएकी हुन ।
नेपाली चलचित्रका सदाबहार नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र नायिका स्वेता खड्का २०७२ साल असार २२ गते एक भएका थिए । तर भगवानको लिला पनि कस्तो अहिले स्वेता मात्र छिन् । विवाह गरेको १ महिनामा नै संसार छोडेर भगवानका प्यारा भएका श्रीकृष्णलाई अहिले सम्झनु भन्दा अरु विकल्प छैंन ।लामो समयसम्म प्रेममा रहेपछि विवाह गरेका उनीहरुले जिन्दगीमा निकै मिठामिठा यादहरु साचेका थिए । विवाह गरेको दुई दिनपछि हनिमुन मनाउन भारतको सिम्ला प्रस्तान गरेको बखत नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले २ बर्षसम्म सन्तान नजन्माउने भन्दैं आफ्ना फ्यानहरुलाई हात हल्लाएको आजै जस्तो लाग्छ ।
तर उनको त्यो रहर पुरा हुन सकेन । बिहे भएकै दिन श्रीकृष्ण र श्वेताले फिल्म क्षेत्रका व्यक्तिलाई समेत निम्त्याएर भव्य पार्टी दिएका थिए । उनको २४ गते श्रीकृष्ण श्रेष्ठ भारतको गंगाराम अस्पतालमा स्वर्गिय हुँदा सारा नेपालीमा शोक छायो । बोन क्यान्सरका कारण श्रीकृष्णको मृत्युको थियो । फिल्म ‘कहाँ भेटिएला’ मा श्रीकृष्णको जोडी भएर श्वेताले अभिनय गरेकी थिइन् । सोही फिल्ममा काम गर्दा श्वेता र श्रीकृष्ण एक अर्कामा नजिकिएका थिए । लामो समयको प्रेम पछि श्रीकृष्ण र श्वेताले पारिवारिक सहमतीमा गएको एक वर्ष अगाडी विवाह गरेका थिए ।
फिल्म ‘कहाँ भेटिएला’ बाटै नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी श्वेताले फिल्महरु ‘श्रीमान् श्रीमती’ र ‘कोहिनूर’ मा श्रीकृष्णको जोडी भएर अभिनय गरेकी छन् । श्रीकृष्णले निर्माण गरेको दोश्रो फिल्म ‘कोहिनूर’ हो । जुन फिल्म उनको निधन हुँदा हलमा प्रदर्शन भैरहेको थियो । श्रीकृष्णको शवलाई सरकारी सम्मान सहित पशुपति आर्याघाटमा अत्यष्टि गरिएको थियो ।विवाहपछि ससुराली आउने सपना दिल्लीमा केमो थेरापीको पहिलो डोजसँगै अन्त्य भएको छ । श्वेताको घरमा तला थपिरहेको समय पनि श्रीकृष्णले अभिभावकको भूमिका निभाएका थिए । ‘उहाँ मेरो मात्र नभई घरकै अभिभावक बन्नु भएको छ,’ श्वेताले अघिल्लो दसैंमा भनेको सम्झिए छिमेकी शिव महतले ।
जतिबेला रञ्जना (श्वेता) श्रीराम माबि खोपासीबाट एसएलसी सकेर इन्द्रेश्वरमा भर्ना भइन्, त्यतिबेला फिल्म, नृत्य, भलिवल र फुटबलमा रुची थियो । २०६१ सालमा पनौतीको इन्द्रेश्वर उच्च माविमा कक्षा ११ को शिक्षा संकायमा भर्ना भएकी उनी प्लसटु सकाएर काठमाण्डु गइन् । आफन्तकोमा बसेर नृत्यको कक्षा लिन थालिन् । त्यतिबेला श्रीकृष्ण श्रेष्ठले निर्माण गर्न लागेको ‘कहाँ भेटिएला’ फिल्मका लागि नायिका खोजी भइरहेको थियो । श्रीकृष्णले साथीभाइको सहयोगमा रञ्जनाको नृत्य हेर्न प्रशिक्षण केन्द्र पुगे । श्रीकृष्णले नृत्य मन पराए र नेपाली फिल्मप्रतिको बुझाई ,हेराइ र आइपर्दा फिल्म खेल्ने सोचका बारेमा प्रत्यक्ष कुरा गरे ।
त्यतिबेला रञ्जना श्वेता भइसकेकी थिइन् । श्रीकृष्णजस्तो कलाकारले आफ्नो नृत्य मन पराएर एकैपटक ठूलो फिल्ममा प्रस्ताव गर्दा आनाकानी गर्ने कुरै भएन । त्यतिबेलैदेखि श्रीकृष्ण श्वेताको अभिभावक बने ।उनी भाडामा बस्थिन् । बाबु जमदार ओतबहादुर खड्का र आमा गोमा खड्काको पहिलो सन्तान हुन् श्वेता । दुई भाई र एक बहिनीको श्रीकृष्णले श्वेतालेभन्दा बढी रेखदेख गरे । उनीहरुकै सहयोगमा बहिनी आरजी इजरायल गइन् । इजरायलमा केही वर्ष बसेपछि पुनः नेपाल आएर गत वर्ष मात्रै फर्किएकी थिइन् । दुई भाई शैलेष र शिव अध्ययन सँगसँगै काठमाण्डुमा काम गर्न थाले । श्वेताले फिल्म खेल्दै श्रीकृष्णसँग व्यापार सुरु गरेपछि बालाजुमा सात महिना मात्रै भयो परिवारका लागि घर खरिद गरेको ।
श्वेताको फिल्ममा अनुवन्धित भएपछि सुटिङका क्रममा र्पुयाउन र लिन आउने गरेका श्रीकृष्ण त्यतिबेलादेखि नै खोपासी घरमै बस्न थालेका थिए । जब फिल्म हिट भयो, त्यसपछि खोपासी आउने क्रम बाक्लिएको थियो । ‘एकपटक भेटेको मान्छेलाई कहिल्यै नबिर्सने क्षमता भएका सरल र शिष्ट श्रीकृष्ण कसैले नमस्कार गरे गाडी रोकेरै दुई हात जोड्थे’ शिब सम्झन्छन् ।जतिपटक खोपासी आइपुग्थे, त्यति नै पटक छिमेकीसँग भेटघाट गर्थे । ‘हरेक दसैंमा श्रीकृष्ण श्वेतालाई र्पुयाउन खोपासी आउँथे र सिन्धुपाल्चोक घरमा लगेर फर्कंदा श्वेतालाई साथै लिएर फर्कन्थे । ‘विवाहपछि खोपासी आउने सपना अधुरै रह्यो’ शिवले भने । ओतबहादुरका चारबवटी श्रीमतीमध्ये कान्छी हुन् गोमा । उनकै कोखबाट जन्मेकी पहिलो सन्तान श्वेताको खुसीका लागि परिवारले उनको निर्णयलाई कहिल्यै छेकेन । हेर्नुहोस तस्बिरहरु